Author Topic: Sidee uur loo qaadaa? Xilligee Ayaana Ugu Fiican? (Read 255814 times)
« on: June 24, 2015, 04:10:08 PM »
2- Midda ku xigta waa in aad lammaanahaaga aad si joogto u kulantaan si ay rajada in aad uur u qaadid u koroto, qof safar ku maqan ama muddo gaaban aad isla joogtaan laguma dhisi karo go'aan ah in aadan uur qaadi karin, waxaa laga yaabaa muddadaas aad is arkaysaan in jirkaaga ma xaaladdaada in aysan diyaar u ahayn in aad uur qaaddid.
Haddii aad rabtid in aa sii ogaatid xilliga ugu habboon ee aad uur yeelan kartid, waxaa jiro qalab kaadida lagu baaro oo aad farmashiga ka soo gadan karto oo loo yaqaano "OVulation predictor kit" oo howshiisu tahay in xilliga ugxanta la soo deynayo inuu kuu xisaabiyo iyadoo kaadida laga eegayo hormoonnada heerarkooda.
5- Midda shanaad, waxaad takhtarka la xiriirta 2 sano kadib haddii ay da'daadu ka yar tahay 30 sano oo aad adiga iyo xaaskaaga aad caafimaad qabtaan, si joogtane aad isku aragteen, si loo baaro haddii ay jiraan xanuuno ama cillado kale oo ka hortagi karo uurka.
Caafimaad baan kuu rajanayaa.
Haddii aad su'aal la xiriirto qoraalkaan aad qabtid ku soo gudbi qeybta su'aalaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
Views: 16514 September 09, 2015, 01:14:18 PM
Views: 47876 December 21, 2009, 07:54:40 PM
Views: 21665 March 10, 2011, 06:10:21 PM
Views: 17799 December 05, 2011, 11:25:44 PM
Views: 47355 May 19, 2012, 12:50:12 PM